के कति खाने ? कस्तो र कति कसरत गर्ने मधुमेहका बिरामीले ? बुझिराखे धेरैको जोगिन्छ ज्यान - ज्ञानविज्ञान
त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी पोषणविद् नानीशोभा शाक्यका अनुसार मधुमेहका रोगीले के खाने भन्दा पनि कति र कसरी खाने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । मधुमेहका रोगीले सबै खानेकुरा मिलाएर खानु पर्छ। तर बढी चिल्लो र गुलियो खानेकुराहरू भने खानु हुँदैन ।
कसैलाई मधुमेह लाग्यो कि यो खान हुन्न, त्यो खान हुन्न भन्ने गरेको सुनिन्छ । कतिपयले कुनै खाने कुरा रोग बढ्ने डरले छुँदा पनि छुँदैनन् । कतिले चाहिँ घुमीफिरी कार्बोहाइड्रेट नै बढी खाइरहेका हुन्छन् । कतिले उसिना चामलको भात टन्न खाने गरेको पनि पाइन्छ । कडा मधुमेहका बिरामी जसको शरीरमा कहिलेकाहीं ग्लुकोजको मात्रा धेरै घटेर पसिना आउने, रिंगटा लाग्नेजस्ता समस्या आउँछन् ।
त्यस्तो बेलामा यस्ता खानेकुरा खानुपर्छ:
१. मधुमेहका बिरामीले भात कम खाने बहानामा अन्य अन्न तथा कार्बोहाइड्रेट खाने चलन पनि छ । यसो गर्नु गलत हो । बरू यसको साटो अन्नका सबै परिकार मात्रा मिलाएर खाँदा असर पर्दैन । आफ्नो कामको प्रकृति, शारीरिक संरचना, उमेर र लिङ्गअनुसार यी सबै खालका खानेकुराको मात्रा मिलाएर खान सकिन्छ ।
२. यी खाने कुरा खाँदा अन्नको सबै समूह समावेश गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी प्रोटिनयुक्त खानेकुराको मात्रा, नजम्ने प्रकारका चिल्लो पदार्थबाट बनेका खानाहरू, खनिज तथा भिटामिनयुक्त खानाहरू खानु पर्छ। तर धेरै चिल्लो र गुलियो खानेकु्रा भने खानु हुँदैन । आलु, पिँडालु, सखरखण्डजस्ता खानेकुरा खानु परेमा भात, रोटी खानु हुँदैन ।
३. यसमा पनि शारीरिक श्रम गर्नेहरूले अन्य मधुमेहका रोगीको तुलनामा केही मात्रा थप गरी खान सक्छन् । श्रम नगर्नेहरूले भने सबै खानाहरूको कम मात्रा मिलाएर खान सकिन्छ । यसो गर्दा शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्न पाउँदैन ।
४. वृद्ध उमेर भएका मधुमेहका रोगीले पनि सबै थरिका खाना कम मात्रामा खान सक्छन् ।
५. मधुमेह बिरामीको तौल बढी छ भने तौल घटाउन सकेसम्म कम खाने र नियमित कम्तिमा आधादेखि एक घण्टा हिँड्नु पर्छ । अन्य किसिमका मधुमेहका बिरामीले पनि अनिवार्य
रूपमा व्यायम र हिंडडुल गर्नु आवश्यक छ ।
मधुमेह बिरामीका लागि औषधिको मात्रा दिएझैं एरोबिक कसरतको पनि सही मात्रा लिखित रुपमै दिन सकिन्छ, जसले गर्दा बिरामीलाई कसरत गर्दा कुनै प्रकारको भ्रम र निराशा हुँदैन । मधुमेह रोगको प्रमुख विशेषता नै मानिसको रगतमा ग्लुकोज (सुगर) को मात्रा खाना खानुअघि या खाएपछि वा दुवै अवस्थामा तोकिएको मात्रा भन्दा बढी देखिनु हो । मानिसको शरीरमा प्याङक्रियाज भन्ने ग्रन्थी हुन्छ, जसले इन्सुलिन होर्मोन उत्पादन गर्छ । इन्सुलिनको मुख्य काम भने रगतमा भएको अधिक ग्लुकोजलाई मांशपेशी वा कलेजोभित्र पठाउनु हो । मधुमेह रोगमा सो ग्रन्थीबाट कम मात्रामा इन्सुलिन होर्मोन निस्किन्छ अथवा इन्सुलिन होर्मोनको कार्यक्षमतामा नै कमी आउँछ, जसको कारण सुगरको मात्रा रगतमा बढी हुन जान्छ ।
‘५ सय एमजीको मेटफर्मिन चक्की दिनमा दुई पटक गरी एक महिनासम्म खानुहोस्’ भन्ने वाक्यांश मधुमेहका बिरामीका लागि नौलो नहोला । तर, ‘कसरतका लागि बिहान सधैं आधा घन्टा हिँड्नुहोस्’ भन्दा केही सूचना अपुग भएको भान हुन्छ । ‘के आधा घन्टा हिँडेर मलाई चाँहिदो फाइदा हुन्छ त ? अथवा म कतिसम्म छिटो हिँड्नु पर्ने होला, या हिँड्नुसँगै अरु केही गर्नुपर्छ कि ? हिँड्नु बाहेक अरु केही उपाय छ त ?’ यस्ता थुप्रै कौतुहलता मधुमेहका बिरामीमा हुन सक्छ । मधुमेहका बिरामीले व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म बुझेका हुन सक्छन् तर कति र कस्तो व्यायाम गर्ने भन्ने धेरैलाई थाह नहुन सक्छ ।
३. मधुमेह बिरामीले सुरुमै मध्यम तहको एरोबिक कसरत गर्नु हुँदैन तर अत्यन्त सजिलो तहबाट कसरत सुरु गर्नुपर्छ र अवधि पनि ५ देखि १० मिनेट मात्रै राख्नुपर्छ । हरेक हप्ता
आफूले सकेसम्म कसरतको तह र अवधि दुवै बढाउँदै जानुपर्छ ।
Topics #मधुमेह #मधुमेह बिरामी #मधुमेह रोगीले खानु पर्ने खानेकुरा #मधुमेह रोगीले गर्नु पर्ने कसरत
Don't Miss it के हाे मधुमेह ? रोकथाम कसरी गर्ने ? मधुमेहबाट बच्ने यी हुन् सजिलो ५ फर्मुलाहरु
कुन कुन फलफूलका बोक्रा फाल्नु हुँदैन ? थाहा पाउनुहोस
सुन्तला – सास गनाउने समस्या छ भने सुन्तलाको बोक्रा खानाले राम्रो गर्छ । यसमा पाइने एसिडले मुखमा रहेका ब्याक्टेरिया नाश…
One thought on “के कति खाने ? कस्तो र कति कसरत गर्ने मधुमेहका बिरामीले ? बुझिराखे धेरैको जोगिन्छ ज्यान”
अति उत्तम छ । याे जानकारीकाे लागि धेरै धेरै धन्यवाद ।